Romafo 15 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Romafo 15:1-33
Obiara nnye ne yɔnko ntom, sɛnea Kristo nso gyee mo toom no (1-13)
Paul, ɔsomfo ma amanaman no (14-21)
Paul akwantu nhyehyɛe (22-33)
15 Yɛn a yɛyɛ den no, ɛsɛ sɛ yɛsoa wɔn a wɔnyɛ den no mmerɛwyɛ,+ na ɛnsɛ sɛ yɛyɛ nea yɛn ankasa pɛ.+ 2 Momma yɛn mu biara nyɛ nea ne yɔnko pɛ, nea eye a ɛbɛhyɛ ne yɔnko den.+ 3 Na Kristo mpo anyɛ nea ɔno ara pɛ,+ na mmom sɛnea wɔakyerɛw no: “Wɔn a wogu w’anim ase no, wɔn animguase aba me so.”+ 4 Na biribiara a wɔakyerɛw ato hɔ no, wɔakyerɛw sɛ ɛnkyerɛkyerɛ yɛn,+ na yɛnam yɛn animia+ ne Kyerɛwnsɛm no mu awerɛkyekye so anya anidaso.+ 5 Onyankopɔn a ɔma yetumi mia yɛn ani gyina mu na ɔma yɛn awerɛkyekye no, ɔmma mo nyinaa nnya adwene a na Kristo Yesu wɔ no ara bi, 6 sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛyɛ baako,+ na mode nne* koro ahyɛ yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne n’Agya anuonyam. 7 Enti obiara nnye ne yɔnko ntom,*+ sɛnea Kristo nso gyee mo toom no,+ na ahyɛ Onyankopɔn anuonyam. 8 Na mereka akyerɛ mo sɛ, Kristo bɛyɛɛ ɔsomfo maa wɔn a Onyankopɔn nokwaredi nti wɔatwa twetia*+ no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛma ada adi sɛ ɛbɔ ahorow a Onyankopɔn hyɛɛ wɔn agyanom no bɛba mu,+ 9 na ama amanaman no ahyɛ Onyankopɔn anuonyam esiane ne mmɔborɔhunu nti.+ Sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Ɛno nti na mɛpae mu abɔ wo din wɔ amanaman mu, na mato ayeyi nnwom ama wo din”+ no. 10 Na ɔsan kae sɛ: “Amanaman, mo ne ne man ani nnye.”+ 11 Ɔkae bio sɛ: “Amanaman nyinaa, munyi Yehowa* ayɛ, na momma aman nyinaa nkamfo no.”+ 12 Na bio nso Yesaia kae sɛ: “Yese ntini bɛba,+ na obi bɛsɔre abedi amanaman so.+ Ɔno na amanaman de wɔn ani bɛto no so.”+ 13 Esiane sɛ mugye Onyankopɔn a ɔma anidaso no di nti, ɔmfa anigye ne asomdwoe bebree nhyɛ mo ma, sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛfa honhom kronkron ahoɔden+ so anya anidaso aboro so.* 14 Me nuanom, me ara migye di sɛ papayɛ nso ahyɛ mo ma, na nimdeɛ nyinaa ahyɛ mo ma, na obiara tumi tu ne yɔnko fo.* 15 Nanso, makyerɛw mo aka nsɛm bi penpen sɛnea ɛbɛyɛ a mɛsan de akaakae mo. Mereyɛ saa esiane adom a Onyankopɔn de ama me no nti. 16 Wadom me, sɛnea ɛbɛyɛ a mɛyɛ Kristo Yesu baguam somfo ama amanaman no.+ Mereyɛ Onyankopɔn asɛmpa+ ho adwuma kronkron no, sɛnea ɛbɛyɛ a amanaman yi bɛyɛ afɔrebɔde a ɛsɔ ani a wɔde honhom kronkron atew ho. 17 Enti ɛba nneɛma a ɛfa Onyankopɔn ho a, mewɔ nea megyina so adi ahurusi wɔ Kristo Yesu mu. 18 Na merensi me bo sɛ mɛka biribiara, gye nea Kristo nam me so ayɛ nko ara. Kristo nam me so yɛɛ adwuma sɛnea ɛbɛyɛ a amanaman no bɛyɛ osetie. Ɔfaa m’asɛm ne m’adwuma so na ɛyɛɛ saa. 19 Ɔsan nso faa nsɛnkyerɛnne ne anwonwade tumi+ ne honhom kronkron tumi so na ɛyɛɛ saa. Ɛno nti, mekaa Kristo ho asɛmpa no frenkyemm fii Yerusalem kɔe ara koduu Ilirikum.+ 20 Saa kwan yi so no, mede yɛɛ me botae sɛ merenka asɛmpa no wɔ baabi a nkurɔfo ate Kristo din wɔ hɔ dedaw, sɛnea ɛbɛyɛ a merensi nsi obi fapem so; 21 na mmom, sɛnea wɔakyerɛw no: “Wɔn a wɔnkaa ne ho asɛm nkyerɛɛ wɔn no behu, na wɔn a wɔntee no bɛte ase.”+ 22 Ɛno nso nti na meyɛe ara nso mantumi amma mo nkyɛn no. 23 Nanso seesei asaase biara nni hɔ a menkaa asɛm no wɔ so wɔ mpɔtam ha, na mfe pii* ni na mahwɛ kwan denneennen sɛ mɛba mo nkyɛn. 24 Enti sɛ merekɔ Spain a, mehwɛ kwan sɛ mehu mo, na sɛ me ne mo bɔ kakra a, moagya me kwan kakra ama makɔ hɔ. 25 Nanso seesei de, merebɛkɔ Yerusalem akɔsom akronkronfo no.+ 26 Na wɔn a wɔwɔ Makedonia ne Akaia no ani agye sɛ wɔde wɔn nneɛma ama sɛ ntoboa de rekɔma akronkronfo a ɛwɔ Yerusalem no mu ahiafo.+ 27 Ɛwom, wɔde anigye na ɛyɛɛ saa, nanso na wɔde wɔn ka; efisɛ nneɛma a wonya fii Onyankopɔn hɔ no, amanaman no ne wɔn kyɛe. Enti ɛsɛ sɛ wɔn nso de wɔn nneɛma som wɔn bi.+ 28 Enti sɛ miwie eyi, na sɛ mede saa ntoboa* yi kɔma wɔn a, mɛfa mo hɔ akɔ Spain. 29 Bio nso, minim sɛ minya ba mo nkyɛn a, mede Kristo nhyira a abu so bɛba. 30 Afei anuanom, menam yɛn Awurade Yesu Kristo ne honhom no dɔ so srɛ mo sɛ, monka me ho na monyere mo ho mmɔ Onyankopɔn mpae mma me,+ 31 sɛnea ɛbɛyɛ a wobegye me+ afi wɔn a wonnye nni nsam wɔ Yudea, na akronkronfo no ani agye me som adwuma a merekɔyɛ wɔ Yerusalem no ho,+ 32 na sɛ ɛyɛ Onyankopɔn pɛ a, mede anigye aba mo nkyɛn, na me ne mo nyinaa, obiara ho adwo no. 33 Onyankopɔn a ɔma asomdwoe no ne mo nyinaa ntena.+ Amen.
^ Anaa “munnye mo ho mo ho.”
^ Anaa “ama abu afa so.”
^ Anaa “kyerɛkyerɛ ne yɔnko.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “bi.”